Laba beddel oo NERO lagu gubo CD iyo DVD loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan u isticmaalnaa CD-yada iyo DVD-yada wax yar iyo ka yarba, maxaa yeelay waxaan u haajirnay Blu-Ray iyo USB, laakiin way sii wadaan inay nagu hareeraysan yihiin. Waxay u badan tahay in badan oo naga mid ahi ay leeyihiin sannado shaqo, ciyaaro, muusig iyo filimo lagu taageeray cajaladahaan, dad badanna wali waxay u isticmaalaan maalin kasta.
Tusaale ahaan, markii aan ka shaqeynayay xiriirka dadweynaha waxay aad u anfacayeen in macluumaadka loo gudbiyo saxafiyiinta iyo qaab dhaqaale. Wali waa ikhtiyaar aad u fiican kiisaskaas. Sidoo kale waa waxtar in loo sameeyo isku darka muusikada xubin qoyska ka mid ah ama saaxiib, maadaama baabuurta qaarkood ay weli leeyihiin ciyaartoy CD ah Iyo saynisyahannada kombiyuutarka waxay faa'iido u lahaan karaan markay u baahdaan inay beddelaan nidaamka hawlgalka ee kombuyuutar duug ah, halkaas oo USB uusan ka shaqeyn.
Sabab kasta ha noqotee, waxaa jira suurtagal xoog leh taas Aynu sii wadno adeegsiga CD / DVD-yada sannadaha soo socda; iyo kuwa u haajiray inay ka furaan softiweer il furan waxay ku habboon tahay helitaanka qalab lagu gubo saxannada si fudud Taasi waa sababta aan kuugu soo bandhigeyno dhowr barnaamij, oo ka duwan Nero, kaas oo kaa caawin kara hada oo aad leedahay GNU / Linux operating system.
1.1 Sida loo rakibo Brasero
2.1 Sida loo rakibo K3b
Naqshadeeyay Gnome loona qaybiyay GNU / Linux, Brasero waxay ka kooban tahay interface GUI nadiif ah oo ku filan si loo abuuro cajalado kala duwan. Markaad furto markii ugu horreysay, waxay kuu soo bandhigeysaa xulashooyin taxane ah oo aad ku abuureyso maqal, muuqaal ama cajalad xog ah; sidoo kale waxaad awoodi kartaa 1: 1 nuqul oo saxannada jira. Waxaa ku jira tifaftiraha daboolka, kaas oo aan u horumarsanayn sida barnaamij loogu talagalay abuurista daboolida laakiin way wanaagsan tahay inuu haysto. Ugu dambeyntiina, wax wanaagsan oo ku saabsan Brasero waa isku xirnaanta ballaadhinta, taas oo u oggolaanaysa qalab kala duwan in si gooni gooni ah loogu daro.
Sida loo rakibo Brasero
Waxaan kala soo bixi karnaa Brasero:
Kaydinta Brasero (HTTP): http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
Kaydinta Brasero (FTP): ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
Ku tiirsanaanta looga baahan yahay Brasero
gst-plugins-saldhig-1.8.3, barkadda-2.0.2, libcanberra-0.30 y libnotify-0.7.6
Kadibna waan rakibnaa Brasero socda amarrada soo socda:
./configure --prefix = / usr \_ --enable-compile-digniin = maya \_ --enable-cxx-digniin = maya && make
Ku xig sida isticmaale root
Kuwa ugu habboon ee la jaanqaadaya adduunka KDE, K3b (soo koobista KDE Burn Baby Burn) waa beddel weyn. Sida Brasero, K3b waxay ku habboontahay noocyo iyo qaabab kala duwan oo cajalado ah, iyo sidoo kale qalab taxane ah iyo amarro loo adeegsan doono barnaamijka oo dhan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa adiga inbadan oo aad xakameyso habka loo abuurayo disc. Asal ahaan, K3b waa interface aad u fiican.
Software-kani wax cusbooneysiin ah ma uusan helin dhowaan, laakiin midka hadda jira waa mid aad u deggan oo qalab badan leh. Marka ma ahan inay walaac geliso inta badan isticmaaleyaasha.
Sida loo rakibo K3b
ka shuruudaha lagu rakibo K3b waxaa laga heli karaa websaydhkeeda rasmiga ah, markii aan rakibno ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah
Waxaan ka soo degsanaa koodhka isha K3b soo dejiso bogga
Waxaan ka soo saaraynaa koodhka ilaha galka dookhayaga:
Waxaan u beddeleynaa galka aan abuurnay:
Waxaan u qaabeyneynaa lambarka:
Noocyadii hore ee K3b waxay ahayd lagama maarmaan in la bixiyo horgale, laakiin nidaamka isku dubaridka cusub ee KDE wuxuu awoodaa inuu si sax ah u qiyaaso
Haddii amarkii hore uusan tuurin wax qalad ah, waxaan u soconaa inaan rakibno K3b, oo ah isticmaale ahaan xidid
# su -c "samee rakib"
Hadda waxaad bilaabi kartaa adeegsiga k3b, oo laga heli karo qeybta multimaia ee liiska arjigaaga
Hagaag, waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo Nero, waxaan u arkaa labada lamaane inay aad u fiican yihiin, laakiin haddii aad hayso talo soo jeedin kale waxaan jeclaan lahayn inaan ogaanno. Nala wadaag
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Laba beddel oo loogu talagalay NERO oo loogu talagalay gubista CD-yada iyo DVD-yada loogu talagalay Linux
dadku weli ma isticmaalaan nero?
Tan iyo markii aan ka tagay XP waxaan u dhiibtay inuu dhinto
Hagaag, way isticmaalaan, way isticmaalaan, in kasta oo aan u malaynayo inay jiraan xalal horaba lahaansho ka fiican yahay Nero, in kasta oo ay tani sii ahaato kuwa ugu caansan .. Hada software-ka bilaashka ah, brasero waa mid aad u fiican
Xaqiiqdii haa hahaha, sidoo kale waxaan isaga u dhiibtay dhimashadiisa, inuu isagu weli ahaa kan ugu caansan, si hufan hadda waan ka shakisanahay.
Dhinaca kale, warbaahinta indhaha ayaa durbaba qaadaysa kursiga dambe, xitaa marka la eego bluray waxaad horeba ugu daawan kartaa filim adigoo adeegsanaya. Shakhsi ahaan, waxaan horeyba u doortey USB, SD iyo waxyaabo kale oo aan ku sameeyo qaabeynta iyo waxyaabo badan.
Maqaal wanaagsan, hubaal k3b wax badan oo dhammaystiran 🙂
Sannadihii aan ku gubay DVD aad u badan beddelka xD waxaan isticmaalay k3b badan si fudud ayey u fiican tahay, maxaa yeelay marwalba waxaan isticmaalaa Gnome, dhib kama qabo inaan rakibo dhowr maktabadood oo Kde ah gabi ahaanba, waxbaa khaldanaa oo loo yaqaan 'brazier', waxaan badanaa lahaan jiray khaladaad DVD9 ah, sidaa darteed Go'an Waxaan isticmaalay K3b, hadda waqtiyadan hadda ma sii isticmaalo DVD-ga iyo haddii ay lagama maarmaan tahay in wax la duubo waxaan si fudud u adeegsanayaa amarka.
Ku jawaab MoDeM
Sidayda oo kale, marwalba waan ka jeclaa K3b Brasero xitaa ka shaqeynta bay'ada GTK… Si la mid ah labadooduba way fiican yihiin
Gubashooyinka CD-yada ama DVD-yada hoostooda Linux waa wax yar (xitaa waa laga sameyn karaa qolofka). Laakiin duubista Bluray iyadoo la adeegsanayo barnaamij Linux ah ayaa ah, ugu yaraan, waa dhib badan.
Waxaan u isticmaalaa imgburn, kaas oo loogu talagalay Windows laakiin wuxuu u shaqeeyaa 100% khamriga Linux.
Ku jawaab fprietog
Brasero waxay ku timaadaa asal ahaan waxyaabo fara badan oo fudud, way shaqeysaa iyadoo aan laalaab badan lahayn, waxaad ku gubi kartaa iso diskkaaga waxaadna sameyn kartaa 300 nuqul oo CD ama DVD ah, K3b waa mid aad u dhameystiran laakiin badankood ma isticmaalaan awoodooda buuxda Waxay keeni karaan warar cusub oo cusub, waa in lala hadlo ee brasero iyo K3b oo horeyba maanta si fiican loo yaqaanay, duubista xusuusta ayaa ka dhaqso iyo dhib badan. Farxad
Ku jawaab HO2gi
Waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo. Marka aan koobi sameeyo (isku darka muusikada qaab mp3), badiyaa waan sameeyaa (marka aan isticmaalayo Windows) Realplayer. Waxay lahayd faa iidada ah in macluumaadka faylka oo dhan loo gudbiyo CD-ga. Taasi waa, markii muusikada lagu dhejiyo CD-ga gaariga, tusaale ahaan, macluumaadka cinwaanka heesta ayaa soo muuqan lahaa. Labadan barnaamij (Brasero iyo K3b), isku si ma u qabtaan?
Jawaab Aurelio Janeiro
Waxaan dareemayaa inaan u safray waagii hore markii aan aqrinayay qoraalkan, Brasero iyo shaashadaha shaashadda leh midabka buniga ah ee Ubuntu hore.
Waxaan moodayay inaad u sheegayso Nero
Waxaan isticmaalaa Brasero, horeyba waxay ugu jirtey nooca 3 ee Ubuntu waxayna u ogolaaneysaa sameynta labadaba maqal maqal ah (oo aan loo dhigin raadiyaha hore ee cd's) halkaasoo heeso kaliya ay kufilan yihiin ilaa xog aruurinta (oo leh mp3 files). Labada xaaladoodba magacyada faylasha oo dhameystiran, in kasta oo ay sidoo kale kuxirantahay awooda idaacadu u leedahay inay aqriso magacyada feylasha ama Tags-yada kujira mp3-ka.
Hagaag, waxaan isticmaalay labada barnaamij iyo Brasero, oo ah mid aad u fudud in la isticmaalo, waxaan la kulmay dhibaatooyin qaar sida duubitaanno aan gadaal laga soo saarin iyo waxyaabo la mid ah oo aanan ku dhibtoon k3b markay u muuqato inay wax yar ka dareen yar yihiin Brasero. Waxaan ku sii jiri lahaa mala-awaal qorraxda leh K3b. Salaan qof walba,
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aad ka aaminsan tahay Xfburn; laguma xusin qodobka waana midda ku habboon Xfce… Ma xuma in aan la xusin? Ama cidina ma garaneyso isaga?
Jawaab Marty Mcfly
Ma xuma haba yaraatee, waxay oggoshahay howlaha aasaasiga ah (iyo dhowr jeer oo aan isticmaalay, wey ii shaqeysay).
Brasero ma la shaqeeyaa Xfce? Xfburn miyuu u gudbiyaa macluumaadka astaamaha isku dhafan mp3-ka?
Dhimasho Dhimasho dijo
Waxaan khibrad wanaagsan u leeyahay k3b oo keliya. Brazier ma jecli, laakiin ma ahan tan ugu xun.
Ku jawaab MorbiDeath
k3b waxay dhibaato ku haysaa xawaaraha duubista ee ray blu, taasi waa sababta 100 jeer ka dhakhso badan tahay Xfburn (lagu taliyay)
Jawaab Jorge Rafael Almeida Orellana
Haye, waxaan ku rakibay Brasero #yum waan ku orday laakiin ma gubi karo ama ma keydin karo faylka CD-ga.
Midkiin ma iga caawin karaa tan?
Ku jawaab Xochitl
MATE 1.16 oo la heli karo iyada oo la hagaajinayo GTK3 + waafaqsanaanta